EU nwere ike ịmanye Google, Amazon ma ọ bụ Apple ka ha gosipụta ụtụ isi ha Esi m mac
EU nwere ike ịmanye Google, Amazon ma ọ bụ Apple ka ha gosipụta ụtụ isi ha
N'oge a ọ bụ ihe European Union chọrọ ịwe ka ọtụtụ mba dị ka Google, Apple, Facebook, Starbucks ma ọ bụ Amazon enwere ike ịmanye ha igosipụta ego ha na enweta na ụtụ isi na Europe maka ekele iwu ọhụrụ ahụ.
N'oge ahụ onyeisi oche nke kọmitii ahụ, Jean-Claude Juncker, na-akọwa na atụmatụ a na-adọrọ mmasị maka nnukwu ụlọ ọrụ iji gosipụta ụtụ isi ha na-akwụ na mba ọ bụla ha na-arụ ọrụ. A na-enweta ya zere nkwekọrịta na ndị ọchịchị mpaghara esi kọọ maka elele gị.
N'ụzọ ezi uche dị na ya akụkọ a banyere European Commission nke ndị na-ajụ ajụjụ bipụtara The Guardian, nọ na usoro nnwapụta ma ọ bụrụ na a kwado ya, a ga-eweta ya na mbido Eprel n’afọ a. Na ụkpụrụ anyị nwere ike ikwenye na ọ bụrụ na emere atụmatụ a, ọ ga-emetụta ụlọ ọrụ mba niile na-arụ ọrụ gburugburu ụwa ma ọ bụghị naanị na EU.
Ma ọ bụ na ọ bụghị naanị Apple dị na crosshairs nke nchịkwa maka ịtụ ụtụ isi, ọtụtụ mba dị iche iche kwenyere na gọọmentị maka uru ha. Ọ bụ ikpe ahụ kọmishọna chọpụtara, Margrethe Vestager, bụ nke hụwororịrị izere ụtụ isi na Starbucks na Netherlands, Fiat na Luxembourg (mgbe ahụ na-akwụ nde euro 30 na ụtụ isi) na ihe mba 35 ndị ​​ọzọ dị na Belgium na-akwụ nde euro 700 maka ịtụ ụtụ isi.
Site na usoro ohuru - ọ bụrụ na akwadoro ya - a ga-egosipụta nkọwa ụtụ nke ọtụtụ mba na izere ụtụ isi site na nnukwu mba ndị a ga-abụ obere ihe mgbagwoju anya. Taa A na-enyocha Apple na Ireland na Amazon na Luxembourg dị ka mba ndị ọzọ buru ibu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » EU nwere ike ịmanye Google, Amazon ma ọ bụ Apple ka ha gosipụta ụtụ isi ha
Ndị na-agba ọsọ na-anwa ịnweta data nke ndị ọrụ Apple
Apple weputara Xcode 7.3 beta 3 maka ndi mmepe